Maalgashadaha Tiknoolajiyada Jarmalka ayaa Hogaaminaya Wareegtada Maalgashiga Markii Ugu Horeysay ee Xashiishada Caafimaadka ee Jarmalka Laga Bilaabo • Dawooyinka Inc.eu
Maal gashadaha farsamada ee Jarmalka ayaa hogaaminaya wareega maalgashiga bilowga xashiishadda caafimaad ee ugu horeysa ee Jarmalka
Jarmalku waxay gaadhay guul muhiim ah oo ku saabsan aagga uu maalgashigu ku kulmayo warshadaha cannabis ee sii kordhaya.
1 Meesha loo leexdo daroogada cannabis ee Jarmalka
2 Nalka cagaaran ee xashiishadda caafimaad ee koraysa
Bilowga Berlin Demecan wuxuu dhammeystiray taxane maaliyad ah oo loogu talagalay 7 milyan oo yuuro si loo ballaariyo xarunteeda wax soo saarka xashiishadda caafimaadka iyo jumlo Jarmalka. Waa shirkadda keliya ee Jarmalka ee loo oggol yahay inay soo saarto xashiishadda caafimaad ee Jarmalka.
Meesha loo leexdo daroogada cannabis ee Jarmalka
Tani waa isbedel dhanka Jarmalka waana maalgashi ugu horreeyay ee waaxdan ku saabsan shabakadda maalgashadayaasha khaaska ah ee ku xiran btov Partners (VC). Qeybta kale ee maaliyaddu waxay ka timid hal hay'ad qoys oo Jarmal ah, oo la rumeysan yahay inay asal u tahay waaxda badeecadaha. Kaliya laba shirkadood oo kale, oo ay ku jiraan Kanada, ayaa helay qandaraaska wax soo saarka xashiishadda dawooyinka ee Jarmalka bishii Maajo 2019.
Btov Partners waxay maamushaa hantida € 420 million waxayna horey u maalgashatay bilaabida tiknoolajiyada sida Blacklane, Data Artisans, DeepL, Facebook, Foodspring, ORCAM, Raisin, SumUp, Volocopter iyo XING.
Nalka cagaaran ee xashiishadda caafimaad ee koraysa
Nalka cagaaran ee ka socda Machadka Dowladda Dhexe ee Daawooyinka iyo Qalabka Caafimaadka (BfArM) wuxuu macnaheedu yahay in Demecan soo saari karto ugu yaraan 2.400 kilos oo ubax cannabis qalalan afarta sano ee soo socota. Demecan sidoo kale waxay u firfircoon tahay soo dhoofsade iyo jumlo xashiishadda dawooyinka sidaas darteed waxay dabooli kartaa dhammaan silsiladda qiimaha. Tan iyo markii dowladda Jarmalka ay oggolaatay in cannabis loo qoro ujeeddooyin daweynta ah ee 2017, baahida ayaa ka sarreysay sahayda.
Jennifer Phan oo ka tirsan btov Partners ayaa bayaan ay soo saartay ku tiri: “Demecan wuxuu ku shaqeynayaa waqtiga saxda ah suuq aad u soo jiidasho leh. Jarmalku wuxuu hada matalaa suuqa sadexaad ee ugu weyn suuqa xashiishadda caafimaadka adduunka wuxuuna ku socdaa wadada koritaanka. Waxaan aaminsanahay in shirkadu ay leedahay faaiidada koowaad ee dhaqaajinta deegaanka suuq aad u nidaamsan, gaar ahaan maadaama ay tahay shirkada kaliya ee wax soosaarka iyo ganacsiga Jarmalka ee suuqa Yurub ”.
Dr. Constantin von der Groeben, oo ah aasaasaha Demecan, ayaa intaas ku daray: “Sanadihii ugu dambeeyay waxaan si xoog leh ula macaamilnay suuqa oo waxaan ku guuleysanay guul muhiim ah anagoo ku guuleysanay howsha qandaraaska. Waxaan hada diirada saareynaa koritaan dheeri ah iyo bilowga wax soo saarka sanadka 2020. ”
Faahfaahin dheeraad ah ka sii aqri TechCrunch (EN, ilaha)
cannabisbeerista cannabisDuitslandEuropadaawada cawskabeerista cannabis
Kobaca Canopy ayaa loo aqoonsaday mid ka mid ah kaydka ugu caansan ee ka mid ah maalgashadayaasha ugu sareeya
Maalgashadayaashu badanaa waxay ka faa'iideystaan ​​iyagoo il gaar ah ku haya suuqa saamiyada. Weli ...
Dhexdhexaadin sida beddel ah oo loo isticmaalo daawooyinka halista ah
Xarunta Caafimaadka ee Jaamacadda Leiden (LUMC) ayaa baari doonta in daaweynta daroogada xashiishka ee isku jirta iyo ...